Qarax gaari oo lala eegtay saldhig milatari oo kuyaala duleedka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQarax gaari oo lala eegtay saldhig milatari oo kuyaala duleedka Muqdisho
February 27, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Qarax gaari oo lala eegtay saldhig milatari oo kuyaala duleedka Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa lagu qarxiyay saldhig millatari oo kuyaala duleedka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan.
Ilaa iyo saddex qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaas, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas maanta oo Isniin ah, balse ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa weeraro kan la mid ah horey u qaaday.
Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011-kii, balse maleeshiyadu wali waxay ka wadaa gudaha caasimada weeraro ay dhiig badan ku daateen.
January 25, 2017 Qarax ruxay huteel kuyaala gudaha magaalada Muqdisho
March 8, 2017 Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
December 1, 2016 Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi oo ku dhaawacmay weerar lala beegsaday
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s new cabinet ministers held its first meeting in Mogadishu on Thursday after the parliament approved them. The meeting was attended by all the new cabinet ministers and chaired by Prime Minister Hassan [...]